Mashruuca Dhismooyinka Badan ee 3 ee Magaalada Istanbul wuxuu u Baxaa Xaraashka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbul3 Mashruuca Korantada Istarliyadda ee Istanbul wuxuu u socdaa hindisada
11 / 10 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
Mashruuca tunnel multi-storey mashruuc weyn wuxuu u socdaa hindise
3 Floor Tunnel Large Istanbul mashaariic ahee Turkey ayaa soo bixi doonaa in ugu dhakhsaha badan wax qandaraas ah. Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan ayaa yidhi, yerli Shirkadaha maxalliga ah iyo kuwa shisheeyeba waxay muujinayaan xiisaha weyn ee mashruuca aan ku talagalnay in aan kula samayno deyn dibadeed.
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa sheegay in shirkadaha maxalliga ah iyo kuwa shisheeyeba ay muujiyeen xiisaha weyn ee qandaraaska 3 Storeyed Big Istanbul Tunnel oo ay qorsheynayaan inay ku mutaystaan ​​amaah shisheeye.
Turhan wuxuu kajawaabey su’aalaha xubnaha saxaafada furitaankii 4th International Highways, Bridges iyo Tunnels Trade Fair oo lagu qabtay Congresium Ankara. Turhan waxay qiimeeysay marxaladda la gaarey qandaraaska 3 Multi-Storey Istanbul Tunnel waxayna tilmaamtay in tirada shirkadaha danaynaya mashruucan ay korodhay iyada oo la raacayo nidaamyada suuqyada maaliyadeed ee adduunka iyo in maalgashadayaasha shisheeye ay muujiyeen xiiso. Wasiirka Turhan, 1915 Çanakkale Bridge oo su’aasha la weydiiyay, howshu way usii wadatay sidii loo qorsheeyay, ayuu yiri. Turhan, oo ku wargaliyay in gawaarida taayirrada leh ee caaga ahi ay ka gudbi doonaan 2022 oo ka imaanaysa Dardanelles Strait, wuxuu yiri: “Gawaarkeenu waxay ka gudbi doonaan Gallipoli una gudbi doonaan Çanakkale daqiiqado gudahood iyadoo aan la sugin oo aan istaagaynin.
Turhan, gaadiidka magaalooyinka waddada tuulada, jid ugu kala qaybsameen of beltway ah, casriyeeyo gacanta ku hal cusboonaysiiyo heerka of network waddada qaranka ee sugnan ee buundada, ayaa dhanka kale, bari-galbeed dhex Turkey, ayaa sheegay in ay ka dhigi jihada waqooyi-koonfur oo ka mid ah wadiiqooyinka caalamiga ah functional ah. Turhan, 17 sanadkii la soo dhaafay oo keliya gaadiidka iyo adeegyada kaabayaasha, 750 bilyan ginni, ayuu xusay. Turhan wuxuu tilmaamay in horumarka xamuulka iyo gaadiidka rakaabka ee wadooyinka uu kudhowaad kacaan yahay iyo in wadada iskuxiran ee isku xirta xNUMX kun oo 6 kiiloomitir oo isku xira kaliya gobolka 101 maanta, kuna xira gobolka 6 kumanaan kilomitir.
Isagoo cadeynaya inay qorsheynayaan inay dhisaan isku-darka xNUMX kun oo 2035 kiiloomitir ah iyadoo loo marayo 5 iyadoo la adeegsanayo qaabka wareejinta-wareejinta, Turhan wuxuu yiri, çalış Shaqada ayaa kusii socota kiloomitir 556 ee mashaariicdan. Waxaan furnay dhammaan Waddada Istanbul-Bursa-Izmir Highway oo ay ku jiraan buundada Osmangazi oo ku taal 597 August. Xadiiqadii 4 kilomitir ee Waqooyiga Marmara, waxaan ku furney qeybta Odayeri-Kurtköy oo ay ku jiraan buundada Yavuz Sultan Selim. Qaybaha Kınalı-Odayeri iyo Kurtköy-Akyazı ayaa sii wada shaqada. Intaa waxaa dheer, qaybta 398 Malkara-Gallipoli, oo ah halka loo yaqaan '1915 Çanakkale Bridge', Jidka Menemen-Aliağa Çandarlı iyo 101 kiiloo mitir ee Ankara-Niğde Highway ayaa laga dhisayaa.
Wasiir Turhan, Marmaray iyo Gebze-Halkalı Wuxuu sheegay in mashaariicda waaweyn sida Wadada Suburban, Yavuz Sultan Selim Bridge, garoonka diyaaradaha Istanbul, Osmangazi Bridge iyo Istanbul-İzmir Highway iyo Eurasia Tunnel ay ka badbaadeen qarnigan, isaga oo ku sii daray awooda awooda caalamiga iyo shaqooyinka sida wadooyinka, wadooyinka waaweyn, buundooyinka iyo tunelada ayaa laf dhabarta ugu weyn ka ah. . Turhan waxay sidoo kale bixisaa macluumaad ku saabsan tareenka xawaaraha sare leh, boqolkiiba 45 ee khadadka jira ee tareenka ayaa laga calaamadeeyay, boqolkiiba 2023'e ee boqolkiiba xNUMX'in ee calaamadaha korantada ayaa la beegsaday, ayuu yidhi.
3-hudheel weyn oo tareenka ah ee Istanbul